1 Samuweli 19 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Samuweli 19:1-24
19 Ekugqibeleni uSawule wathetha kuYonatan unyana wakhe nakubakhonzi bakhe bonke ngokubulala uDavide.+ 2 Ke yena uYonatan, unyana kaSawule, wayeyoliswa kakhulu nguDavide.+ Ngoko uYonatan wamxelela uDavide, esithi: “USawule ubawo ufuna ukukubulalisa. Uze ke ukhe uzilinde, nceda, kusasa, yaye umele uhlale emfihlekweni uze uzifihle.+ 3 Kwaye mna ndiya kuphuma ndize ngokuqinisekileyo ndime ecaleni kukabawo entsimini apho uya kube ukhona, ndithethe ngawe kubawo, ndize ngokuqinisekileyo ndibone oko kuya kwenzeka, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kukuxelela.”+ 4 Ngako oko uYonatan wathetha kakuhle+ ngoDavide kuSawule uyise waza wathi kuye: “Makangoni+ ukumkani kumkhonzi wakhe uDavide, kuba yena akakonanga yaye nemisebenzi yakhe ibilunge kakhulu kuwe.+ 5 Uye wabeka nomphefumlo wakhe entendeni yakhe+ waza waxabela umFilisti,+ khon’ ukuze uYehova amenzele usindiso olukhulu+ uSirayeli wonke. Walubona nawe, waba nemihlali. Ngoko kutheni ufanele wone igazi elimsulwa ngokubulalisa+ uDavide ngento elilize?”+ 6 Wandula ke uSawule walithobela ilizwi likaYonatan, waza uSawule wafunga wathi: “Njengoko ephila uYehova,+ akayi kubulawa.” 7 Emva koko uYonatan wabiza uDavide waza uYonatan wamxelela onke la mazwi. Wandula ke uYonatan wazisa uDavide kuSawule, waza yena waqhubeka ephambi kwakhe ngokufanayo nangaphambili.+ 8 Ekuhambeni kwexesha kwaqhambuka imfazwe kwakhona waza uDavide waphuma waya kulwa namaFilisti wawaxabela ngokubulala ngogonyamelo kakhulu,+ aza asaba emka phambi kwakhe.+ 9 Umoya ombi+ kaYehova waba phezu koSawule xa wayehleli endlwini yakhe enomkhonto esandleni sakhe, ngoxa uDavide wayedlala umculo ngesandla sakhe. 10 Ngenxa yoko uSawule wafuna ukumqhama nodonga+ uDavide ngomkhonto, kodwa waphepha+ wasuka phambi koSawule, ngokokuze umkhonto ubethe eludongeni. UDavide yena wasaba ukuze abaleke ebudeni bobo busuku.+ 11 Kamva uSawule wathumela+ abathunywa endlwini kaDavide ukuba bayilinde nokuze abulawe kusasa;+ kodwa uMikali umfazi wakhe wamxelela uDavide, esithi: “Ukuba akuwubalekisi umphefumlo wakho ngobu busuku, ngomso uya kuba ngofileyo.” 12 Ngoko nangoko uMikali wamhlisa uDavide ngefestile, ukuze ahambe abaleke emke aze asinde.+ 13 Wandula ke uMikali wathabatha umlonde-khaya+ waza wawubeka esingqengqelweni, nomnatha woboya bebhokhwe wawubeka kwindawo yentloko yakhe, emva koko wawugubungela ngesambatho. 14 Ke kaloku uSawule wathumela abathunywa ukuba bamthabathe uDavide, kodwa yena wathi: “Uyagula.”+ 15 Ngoko uSawule wathumela abathunywa ukuya kubona uDavide, esithi: “Mziseni kum ngesingqengqelo eso sakhe ukuze ndimbulale.”+ 16 Bakungena abathunywa, kaloku, kwakukho umlonde-khaya apho esingqengqelweni nomnatha woboya bebhokhwe kwindawo yentloko yakhe. 17 USawule wathi kuMikali: “Kutheni na ukuze wenjenje ukundikhohlisa,+ ulundulule utshaba lwam+ lubaleke?” Naye ke uMikali wathi kuSawule: “Uthe yena kum, ‘Ndindulule! Kutheni na ukuba ndide ndikubulale?’” 18 Ke yena uDavide, wabaleka wemka+ yaye wasinda waza waya kufika kuSamuweli eRama.+ Wamxelela konke uSawule abekwenzile kuye. Wandula ke yena noSamuweli bemka, baya kuhlala eNayoti.+ 19 Ekuhambeni kwexesha ingxelo yafika kuSawule, isithi: “Khangela! UDavide useNayoti yaseRama.” 20 Kwaoko uSawule wathumela abathunywa ukuba baye kuthabatha uDavide. Bathi bakubona abakhulileyo kubaprofeti beprofeta, noSamuweli emi kwisigxina sakhe phezu kwabo, umoya+ kaThixo waba phezu kwabathunywa bakaSawule, baza bona baqala ukuzenza abaprofeti,+ nabo ngokunjalo. 21 Xa wakuxelelwayo oku uSawule, ngoko nangoko wathumela abanye abathunywa, baza baqala ukuzenza abaprofeti, nabo ngokunjalo. Ngoko kwakhona uSawule wathumela abathunywa, abesithathu, baza bazenza abaprofeti, nabo ngokunjalo. 22 Ekugqibeleni naye waya eRama. Akufika ngakwiqula elikhulu elo liseSeku, waqala ukubuzisa nokuthi: “Uphi na uSamuweli noDavide?” Bona bathi: “Nabaya eNayoti+ yaseRama.” 23 Waya ke eNayoti yaseRama, yaye umoya+ kaThixo waba phezu kwakhe, yena kanye, kwaye wahlabela mgama ehamba yaye waqhubeka ezenza umprofeti wada wafika eNayoti yaseRama. 24 Naye wahluba izambatho zakhe wazenza umprofeti, naye ngokunjalo, phambi koSamuweli, waza wawa phantsi eze yonke loo mini nobo busuku bonke.+ Kungenxa yoko le nto kwathiwa: “Uphakathi kwabaprofeti na noSawule?”+
1 Samuweli 19